Wednesday, 17 October 2018 07:52 am, Nepal
भृकुटीको घाटा डेढ अर्ब
मेचीकाली : 2010-08-06 18:08:26
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज कारखानाको रुपमा चिनिएको भृकुटी कागज कारखाना एक अर्ब ४५ करोड घाटामा रहेको छ । कच्चापदार्थको कमीसँगै क्षमता अनुसार कागज उत्पादन गर्न नसकिएका कारण कारखाना घाटामा गएको कारखाना व्यवस्थापनले जनाएको छ । चितवनको नारायणगढसँगै जोडिएको गैडाकोटमा रहेको भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल अहिले चलाउन समेत धौ धौ परेको प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद खनालले जानकारी दिएका छन् । कारखानामा दैनिक ७५ देखि ८५ टनसम्म कागज उत्पादन हुँदै आएकोमा हाल आएर ३० टन कागज उत्पादन गर्न समेत कठिनाई भएको छ ।
भक्तमानका अपहरणकारी जेलमा
मेचीकाली : 2010-08-04 20:42:37
डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनालाई जिल्ला अदालत चितवनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न आदेश दिएको छ। नुवाकोट जिलिङका बद्रीप्रसाद ढुङ्गाना, दार्जिलिङका नवीन क्षेत्री र महाराजगन्जका सुनिल श्रेष्ठविरुद्ध यस्तो आदेश भएको हो। सोमबार अदालतमा मुद्दा दर्ता भई जिल्ला न्यायाधीश पदमराज भट्टको इजलासमा सोमबार र मङ्गलबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो। इजलासमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमल्सिना, सह न्याधिवक्ता भीमप्रसाद भुर्तेल, अधिवक्ता धर्मराज आचार्य ले जाहेरीवालाका तर्फबाट बहस पैरवी गरेका थिए।
अझै तनावमा छन् डाक्टर भक्तमान
एजेन्सी: 2010-07-21 15:04:10
दुई महिनाअघि अपहरणमा परेर १९ दिनपछि मुक्त भएका चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको जीवन अहिलेसम्म सहज भएको छैन। उनले आफू अझै असुरक्षित भएको बताएका छन्। उनले आफूलाई धम्की आइरहेको बताए तर खुलेर बोल्न सकेनन्। उनी बिहान नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा काम सकेर फर्किएका थिए। ‘धेरै फोन उठाउँदिनँ, धेरैको सम्पर्कमा बस्दिनँ, धेरैसँग भेट्दिनँ,' उनले भने ।
देवघाटमा साउने मेला सुरु
मेचीकाली : 2010-07-19 09:38:01
चितवन, ३ साउन
चितवनको पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा साउने सोमबारको मेला आजबाट सुरु भएको छ । मेला भर्न देश तथा विदेशबाट भक्तजन आउने क्रम सुरु भएको छ । साउनको आज पहिलो सोमबार भक्तजन विभिन्न क्षेत्रबाट हिजो नै देवघाट आएर बसेका थिए । अहिले मेला भर्न देवघाटधाममा ठूलो घुइँचो लागेको छ ।
बसले च्यापेर एकको मृत्यु, १५ घाइते
मेचीकाली : 2010-07-19 07:58:18
चितवनको भण्डारास्थित पम्फा खोलाको पुल नजिकै सोमबार बिहान बसले च्यापेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जनाएको छ ।